११ जापानमा सर्वश्रेष्ठ महल! हिमेजी क्यासल, मत्सुमोटो क्यासल, मत्सुयामा कैसल ... - Best of Japan
हिमाजी महल जो निलो आकाशमा चम्किन्छ, हिमेजी शहर, ह्योगो प्रान्त, जापान। हिमेजी महल विश्व सांस्कृतिक सम्पदा मध्ये एक हो। = शटरस्टक
यस पृष्ठमा, म जापानी महलहरूको परिचय दिनेछु। जापानमा ठूला पुराना किल्लाहरू छन्। सब भन्दा प्रसिद्ध Himeji महल र Matsumoto महल हो। यस बाहेक, कुमामोटो महल लोकप्रिय छ। धेरै दुर्भाग्यवस, कुमामोटो किल्ला भर्खरै ठूलो भूकम्पको कारण आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ र अहिले पुनर्स्थापना भइरहेको छ। मत्सुयामा कैसल, इनुयामा कैसल र म्यात्सु क्यासल पनि जापानमा सुन्दर महलको रूपमा सूचीबद्ध छन्। कृपया जापान मा यात्रा गर्दा विभिन्न महलहरूमा हेर्नुहोस्।
Japan जापानका महलहरू विशेष गरी सुन्दर हुन्छन् जब तपाईं चेरी खिलने मौसममा जानुहुन्छ। यदि तपाईंलाई मनपर्‍यो भने कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापानका प्रसिद्ध महलहरू मैदानमा छन्। ती मध्ये धेरै युद्धरत राज्य अवधिको अन्त पछि बनेको थियो (१1568 पछि)। यसको विपरीत, युद्धरत राज्य अवधिको अवधिमा वा अघि निर्मित केही महलहरू पहाडहरू र पहाडहरूमा अवस्थित छन्। अक्सर, ती महलहरू बाक्लो कुहिरोले घेरिएका छन् ...
तसुरुगा महल (आइजुवाकमाटु शहर, फुकुशिमा प्रान्त)
ईडो महल = इम्पीरियल प्यालेस (टोकियो)
मत्सुमोटो क्यासल (मत्सुमोटो शहर, नागानो प्रान्त)
Inuyama महल (Inuyama शहर, आईची प्रान्त)
हिमाजी महल (हिमेजी शहर, ह्योगो प्रान्त)
टेकेडा महल खंडहर (एसागो शहर, ह्योगो प्रान्त)
म्यात्सु कैसल (म्यात्सु शहर, शिमने प्रान्त)
मत्सुयामा महल (मत्सुयामा शहर, एहीम प्रान्त)
सेतो हिरोसाकी महल र मध्य रातको मौसममा यसको रातो काठको पुल, अओमोरी, तोहोकु, जापान = शटरस्टक
हिरोसाकी महल हिरोसाकी शहर, अओमोरी प्रान्त, होन्शुको उत्तरी भागमा अवस्थित एक महल हो। हिरोसाकी महल १ 1611११ मा निर्माण गरिएको हो। अहिले पनि पुरानो महल टावरहरू, ढोकाहरू, ढु stone्गाका पर्खालहरू आदि अझै बाँकी छ। हिमोजी क्यासल र अन्यको तुलनामा हिरोसाकी महल सानो छ, तर यो महल जाडोमा हिउँले ढाकिएको हुन्छ र ज्यादै सुन्दर परिदृश्य छ। वसन्त spectतुमा, शानदार चेरी फूलहरू फूल्छन्, र यो धेरै व्यक्तिको भीडले भरिन्छ। ग्रीष्म theतुमा, पारंपारिक ग्रीष्म festivalतु फेला पर्दछ नेपुत्ता फेस्टिवल, निश्चित रूपमा शरद leavesतुमा पातहरू सुन्दर छन्। हिरोसाकी कासलमा, तपाईं जापानमा चार .तुहरूको सौन्दर्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। म दृढताका साथ यो महल सिफारिस गर्दछु।
हिरोसाकी कासलको विवरणहरूको लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
चेरुरी ब्लासम (साकुरा), फुकुशिमा, जापान = शटरस्टक संग Tsuruga-jo महल
तसुरुगा महल फुकुशिमा प्रान्त, आइजुवाकमात्सु शहरको एक विशाल महल हो। यसलाई Aizuwakamatsu महल पनि भनिन्छ। यो महल १ 1384 मा निर्माण गरिएको थियो। १ 17 औं शताब्दीमा, यो टोकुगावा शोगुनेटको तोहोकु क्षेत्रमा आधारको रूपमा विशाल भयो। वास्तवमा, यस क्षेत्रको जग्गा मालिकले आइजू कुललाई १ th औं शताब्दीमा तोकुगावा शोगुनेट नष्ट भए पछि पनि यस किल्लामा आधारित नयाँ सरकारी सेनाहरूसँग युद्ध गरे। त्सुरुगा महलले नयाँ सरकारले एक महिना भन्दा बढि आक्रमणको सामना गर्यो तर अन्तमा यो पतन भयो। ससुरुगा महलको महलमा, समुराईको वास्तविक कथा जो अन्त नहुन्जेल लडे। यदि तपाईं यस महलमा जानुभयो भने, तपाईंलाई त्यस्तै समुराईको इतिहास थाहा हुनेछ।
Tsurugajo महल पार्क र चेरी ब्लासमस को ढु wall्गा भित्ता। आइजुवाकमात्सु फुकुशिमा जापान। अब अप्रिल = शटरस्टक
दुर्भाग्यवश Tsuruga महल को महल टावर क्षतिग्रस्त र नयाँ सरकारी सेनाहरु संग युद्ध मा भाँचिएको थियो। वर्तमान महल टावर एक प्रबलित कंक्रीट भवन हो जुन १ 1965 .XNUMX मा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। महलको टावर भित्र ससुरुगा महल र अरूको इतिहास प्रस्तुत गर्न संग्रहालयको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
ससुरुगा महलको टाइल भर्खरै रातो टाइलमा परिणत भएको छ। जापानी भवनको छतमा राखिएको छत टाइलको रंग प्रयोग गरिएको माटोमा निर्भर गर्दछ। एक पटक आइजुवाकमात्सुमा, त्यहाँ स्थानीय माटो प्रयोग गरेर धेरै रातो टाइलहरू थिए। ससुरुगा महलको छत विगतमा रातो भएको जस्तो देखिन्छ। यस कारणले गर्दा, रातो टाइल निगाता प्रान्तको निर्माताले बनाएको हो, जसको यस भूमिसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, र ससुरुगा महलको छाना रातोमा परिर्वतन भयो। मलाई लाग्छ पुरानो समुराई मानिसहरूले निश्चय नै रातो महल देखेका थिए जस्तो अहिले छ।
किनकि तसुरुगा महल तोहोकु क्षेत्रमा छ, त्यसैले हिउँदमा हिरोकी कैसल जस्तै हिउँदमा यो सेतो हिउँले ढाकिएको छ। र वसन्त itतुमा यसलाई चेरी फूलहरूसँग रंगिन्छ। ग्रीष्म Theतुमा हरियो रूखहरू सुन्दर छन् र शरद theतुका पातहरू रूखमा झर्छन्। समुराईको ईतिहास पत्ता लगाउन कृपया त्सुरुगा महलमा आउनुहोस्।
Tsuruga महल को विवरण को लागी, कृपया निम्न साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> Tsuruga महल को आधिकारिक साइट यहाँ छ
टोकियो इम्पीरियल प्यालेसको टोकियो फोटोग्राफ र Seimon ईशिबाशी पुल = शटरस्टक
जापानको टोकियो इम्पीरियल प्यालेसमा प्राचीन महल शैली फुजीमि-यागुरा गार्ड टावर भवन = AdobeStock
तपाईं त्यस ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ जहाँ ईडो क्यासल = एडोबस्टकमा महल टावर थियो
टोकियोको इम्पीरियल दरबार कुनै समय देशको सबैभन्दा ठूलो महल थियो जसलाई एदो क्यासल भनिन्थ्यो। "इडो" टोकियोमा पुरानो नाम हो।
एदो टोकुगावा परिवारको आधार थियो जसले १ Japan औं शताब्दीको अन्तदेखि १ th औं शताब्दीसम्म जापानको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्तिमा घमण्ड गरे। जब १ Tok औं शताब्दीको सुरुमा टोकुगावा शोगुनेटको युग शुरु भयो, एडो जापानको राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगे। इडो महल शोगुनको निवासको रूपमा राखिएको थियो।
इडो महल 5.5..4 किलोमिटर पूर्व-पश्चिम, kilometers किलोमिटर उत्तर र दक्षिण, र १ 14 किलोमिटर वरपर थियो। यसबाहेक, बाह्य खुन सहित, यो एक विशाल पैमाने थियो। महल टावर 60० मिटर अग्लो थियो। यद्यपि, महल टावरलाई इडोमा ग्रेट फायरले ध्वस्त पार्यो जुन १ 1657 मा भयो। पछि, महल टावर पुन: निर्माण गरिएको थिएन। किनभने टोकुगावा शोगुनेटले जापानमा पूर्ण रूपमा प्रभुत्व जमाइसकेका थिए र यो त्यस कारणले शान्तिमय युगमा थियो। टोकुगावा शोगुनेटले महल टावरको पुनर्निर्माण गर्नु भन्दा एदो शहरको पुनर्निर्माणमा बढी जोड दिए।
हाल ईडो क्यासल इम्पीरियल प्यालेसको रूपमा प्रयोग भएको छ। तपाईं इम्पीरियल दरबारमा सीमित दिनमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्रत्येक बर्ष जनवरी २। तपाईं सामान्यतया इम्पीरियल प्यालेसको पूर्वी साइड क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ (इम्पीरियल प्यालेसको पूर्वी गार्डन), जो पार्कको रूपमा राखिएको छ। यो टोकियो स्टेशन वा निजुबाशिमा स्टेशन बाट जान सजिलो छ। त्यहाँ एक ठाउँ छ जहाँ पहिले बगैंचामा महल टावर थियो।
इडो महलको बाहिरी खड्ड वर्तमान JR Chuo रेखाको साथ रहन्छ, तपाईं त्यहाँ डु ride्गा चढ्न सक्नुहुन्छ।
विवरणको लागि, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् आधिकारिक टोक्यो गाइड.
मत्सुमोटो महल माट्सुमोटो, जापान = शटरस्टकमा
मत्सुमोटो क्यासल माट्सुमोटो सिटी, नागानो प्रान्त, केन्द्रीय होन्शुमा अवस्थित छ। भनिन्छ कि यस महलको महल टावर १ 16 औं शताब्दीको अन्तदेखि १ 17 औं शताब्दीको सुरुसम्म निर्माण गरिएको थियो। यो महल टावर छ वटा कथा अग्लो छ। मत्सुमोटो क्यासललाई "कासलको महल" पनि भनिन्थ्यो किनभने महल टावर कालो छ।
महल टावर युगमा बनेको थियो, जब युद्ध एक पछि अर्को भएको थियो, रक्षाको लागि विभिन्न चतुराई बनाइएको थियो। विन्डोज सानो छन् र त्यहाँ पत्थरहरु ड्रप गर्न धेरै संयन्त्र छन्।
मत्सुमोटो शहरको वरिपरि पहाडहरू छन् जुन जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। हिउँददेखि लिएर वसन्तसम्म माट्ससुमोटो क्यासल हिउँको साथ सेता भएका पहाडहरूको पृष्ठभूमिमा धेरै सुन्दर देखिन्छ। तपाईं माट्सुमोटो क्यासलको महल टावरबाट पर्वतहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
जापानको सबैभन्दा सुन्दर महलमध्ये नागानो प्रान्तमा माट्सुमोटो क्यासल एक हो। शुद्ध कालो महल टावर १ 1600०० को वरिपरि बनाइएको एक राष्ट्रीय खजानाको रूपमा तोकिएको छ। डिसेम्बर देखि मार्च सम्म, महल हिउँले ढाकिएको छ। यस महलको दृश्य पृष्ठभूमिमा हिउँको पहाडहरूसँग रहेको छ ...
मत्सुमोटो क्यासल जेआर मत्सुमोटो स्टेशनबाट १ 15 मिनेट पैदल अवस्थित छ। मत्सुमोटो क्यासलका विवरणहरूको लागि कृपया निम्न आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
>> मत्सुमोोटो क्यासलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
Inuyama महल ओवरी (अब आईची प्रान्त) र Mino (वर्तमान Gifu प्रान्त) को सिमाना मा 88 XNUMX मीटर उचाईको पहाडमा एक पुरानो महल हो। महलको अगाडि किसो नदी सुन्दर छ।
Inuyama महल ओडा परिवार द्वारा निर्माण गरिएको थियो जसले १ area1537 मा यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमायो। महल टावर अवस्थित सबैभन्दा पुरानो काठको महल टावर हो भनिन्छ। यो फाउन्डेशनको ढु wall्गाको पर्खाल सहित १ meters मिटर उचाईमा छ, भित्री सार्वजनिकताको लागि खुला छ।
१ 16 औं शताब्दीको उत्तरार्धमा, नोबानागा ओडीए, जसले जापानलाई लगभग एकजुट गर्‍यो, युवावस्थामा यो महल शहरको किसोगावा र मिनोलाई हेरे। र उसले विपरित किनारको मिनोमा रहेको सेतो परिवारलाई आक्रमण ग and्यो र क्षेत्र विस्तार गर्न शुरू गर्यो।
Inuyama स्टेशन जो Inuyama महलको नजिकको स्टेशन हो नागोया स्टेशनबाट Meitetsu एक्सप्रेस द्वारा करीव minutes० मिनेटमा। यसले Inuyama स्टेशन बाट Inuyama महल सम्म पैदल १ about मिनेट लिन सक्दछ।
>> Inuyama महल को आधिकारिक साइट यहाँ छ
निज्यो महल ढोका = शटरस्टक
आंतरिक सुनको वालपेपर दरवाजा सजावट, जापान = शटरस्टकको साथ निजो महल
क्योटो शहरमा निजो महल मात्र महल हो। यो महल एक आवास सुविधाको रूपमा निर्माण गरिएको थियो जब १ey औं शताब्दीको उत्तरार्धमा टोकुगावा शोगुनेटको पहिलो शोगुन ईयासु टोकगावा क्योटो आइपुगे। त्यस पछि, तेस्रो शोगुन जो Iemitsu यो महल अझ ठूलो बनायो।
१. Cast किलोमिटर वरपर निजो महल एक सानो महल हो। महल टावर बिजुलीको प्रहारले ध्वस्त भयो, र त्यसपछि यो पुनःनिर्माण गरिएको थिएन। यो महल पहिलो नजरमा अन्य ठूला महलहरू भन्दा अवरको देखिन्छ। यद्यपि वास्तवमा निजो महलमा आएका पर्यटकहरूको सन्तुष्टि स्तर धेरै नै छ।
त्यहाँ धेरै पोइन्टहरू छन् जहाँ निजो महलले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। सबैभन्दा पहिले, निजो महल एक अनमोल पर्यटन आकर्षण हो जसले तपाईंलाई टोकुगावा शोगुनेटको शक्ति महसुस गर्दछ जसले Japan०० बर्षसम्म जापानमा प्रभुत्व जमायो। क्योटोका सुन्दर मन्दिरहरू र मन्दिरहरू देखिसकेपछि, जब तपाईं निजो महलमा पुग्नुहुन्छ, तपाईंले पक्कै समुराईको शक्ति महसुस गर्नुहुन्छ जुन क्योटोका कुलीनहरू र भिक्षुहरू भन्दा फरक छ। जे भए पनि निजो महल सानो छ, पर्खाल र खोरहरू वास्तवमै यथोचित रूपमा निर्माण गरिएको छ, जस्तो कि महलको नमूनालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता दर्शनीय स्थलहरु क्योटो शहरको निजो कासलमा मात्र गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, निजो महलमा तपाई निश्चित रूपमा जापानको इतिहासलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै काठको भवन "निनोमारू गोटेन"। निनोमारू गोडौमा, टोकुगावा शोगुनेटका अन्तिम शोगुन योशिनोबुले घोषणा गरे कि योशिनोबुले राजनैतिक शक्ति सम्राटलाई फिर्ता गर्ने छन्। टाटामी मैटको हल जुन त्यस समयमा प्रयोग भएको थियो अक्षुण्ण छोडियो। त्यो हलमा जीवनका थुप्रै पुतली आकारका योद्धाहरू मिलाइएको छ।
यदि तपाईं क्योटो शहरको भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया यो निजो महलमा ड्रप गर्नुहोस्। निजो कासलको विवरणहरूको लागि, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> निज्यो महलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
ओसाका कासल १ 1585 मा Hideyoshi TOYOTOMI द्वारा निर्माण गरिएको थियो, एक योद्धा जसले सम्पूर्ण देशलाई एकीकृत गर्‍यो। हिडयोशीले यो महलको आधारमा राष्ट्रव्यापी सेनापतिहरू छोडे।
Hideyoshi मृत्यु पछि, उनको छोरो Hedyori यस महल को प्रभु भयो। यद्यपि, १ 1600०० मा टोयोटोमी परिवार र टोकुगावा परिवार बीच एक ठूलो युद्ध भयो। "सेकिगहाराको ब्याट्ल" भन्ने युद्धमा टोकुगावा परिवारले जित्यो, तोकुगावा शोगुनेटको युग शुरु भयो। टोकुगावा परिवारका लागि, टोयोटोमी परिवार एक गडबड गर्ने संस्था थियो। यस कारणले गर्दा, टोकुगावा परिवारले १ 1614१1615 देखि १XNUMX१। सम्म ओसाका कासलमा आक्रमण गरे र यो महल पतन भयो। हिडेयोरी स्वयं क्षतिग्रस्त, ओसाका महल पूर्ण रूपमा नष्ट भयो।
हालको ओसाका महल १ Tok२० देखि १1620२ from सम्म टोकुगावा परिवारले भर्खरै बनाएको महल हो। यो भनिन्छ कि टोकुगावा परिवारले बनाएको महल टावर फाउन्डेशनको ढु wall्गाको पर्खाल सहित 1629 58 मिटर अग्लो थियो। त्यस पछि, महलको धरहरा बिजुलीको प्रहारबाट जलाइयो, तर यसलाई १ 1931 8१ मा पुन: निर्माण गरियो। वर्तमान महल टावर एक--कथा प्रबलित क concrete्क्रीट भवन हो जुन 55 XNUMX मिटरको उचाईको छ। शीर्ष तलाबाट तपाई ओसाका मैदान देख्न सक्नुहुनेछ।
हिमेजी महल जो जापानमा सबैभन्दा लोकप्रिय महल हो
Himeji महल को घर Dec डिसेम्बर, २०१5मा Himeji, जापान मा। महल प्रोटोटाइपिकल जापानी महल आर्किटेक्चर = शटरस्टकको उत्कृष्ट जीवित उदाहरणको रूपमा लिइन्छ
Himeji महल जापान को महल प्रतिनिधि को रूप मा धेरै प्रसिद्ध छ। यस महलमा, महल टावर जस्ता महत्वपूर्ण भवनहरू बाँकी रहेका थिए। यो विदेशी पर्यटकहरु बीच एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण हो।
Himeji महल Himeji शहर मा स्थित छ, Hyogo प्रान्त। यो स्थान ट्राफिकको प्रमुख हब हो, त्यसैले १ug०० मा स्थापना भएको टोकुगावा शोगुनेटले यस क्षेत्रमा ठूलो महल निर्माण गर्ने निर्णय गरे। यस समयमा, जापानको महल निर्माणको लागि प्रविधि उच्च स्तरमा पुग्यो। हिमेजी क्यासल यस समयमा टेक्नोलोजी र ज्ञानको आधारमा निर्माण गरिएको थियो, र यो १ in०1600 मा सम्पन्न भयो। पछि, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बम महल टावरमा राखिएको थियो तर भाग्यवस यो एउटा गलत फायर गोली हो।
यस तरीकाले, जापानको उच्चतम टेक्नोलोजीको साथ निर्माण गरिएको महल चमत्कारी रूपमा छोडियो।
हिमेजी क्यासल सेतो छ। यो रमाईलो छ किनकि सेतो हेरोनले आफ्नो प्वाँख टाढाबाट फैलाउँदछ। यस कारणले गर्दा यस महललाई "श्वेत हेरोन महल (शिरासागीजो)" पनि भनिन्छ।
हिमेजी क्यासलमा थुप्रै महल टावरहरू छन्। बाहिरीबाट आक्रमण गर्ने दुश्मनहरू यस महलमा तल पस्न सक्दैनन् धेरै कैसल टावरहरू जितेका छैनन्। हिमेजी महलको सबैभन्दा ठूलो महल टावर (दाई-तान्शु) एक धेरै अग्लो काठको भवन हो जुन समुद्र सतहबाट 92 २ मिटर माथि छ। यो पहाडमा .45.6 14.85..31.5 मिटरको उचाईमा निर्माण गरिएको थियो। यस महल टावर आधारको ढु wall्गाको भित्ता १ XNUMX मिटर छ। यस ढु stone्गाको पर्खालमा XNUMX१..XNUMX मिटर काठको धरहरा निर्माण गरिएको थियो।
हिमेजी क्यासल १ 1993 XNUMX in मा पहिलो पटक जापानमा युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा दर्ता भएको थियो। यो किल्ला साँच्चै हेर्न लायकको छ।
हिमेजी क्यासलको विवरणहरूको लागि, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> हिमेजी क्यासलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
बादलको माथि पुरानो महल। जापान = शटरस्टक
टेकेडा महल अवशेष, एसागो-शि, जापान = शटरस्टकमा ल्याण्डस्केप
टेकेडा क्यासल भग्नावशेष ह्यागो प्रान्तको असगो सिटीमा समुद्री सतहदेखि 354 100 मिटर माथि पहाडको शीर्षमा फैलियो। त्यहाँ अब तक महल टावर वा टेकेडा महल भग्नावशेषहरूमा गेट छैन। यद्यपि, ढु walls्गाका पर्खालहरू पूरै र पश्चिममा करीव १०० मिटर र उत्तर र दक्षिणमा करिब 400०० मिटरको लागि पूर्ण रूपमै छोडियो। त्यहाँ केही भग्नावशेषहरू छन् जुन जापानमा यस विशाल मापमा पहाडी महलको उपस्थिति प्रदान गर्दछ। त्यसैले टेक्डा क्यासल भग्नावशेष धेरै पर्यटकहरूको भीडले छन्। कुहिरो यस क्षेत्र मा हुन्छ, विशेष गरी शरद inतु मा एक राम्रो घाम बिहान मा। त्यस समयमा, टेक्डा क्यासल रकमा, तपाईं विद्वानहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्लाउडहरू माथि तैरिरहेको छ।
जापानमा १ Os औं शताब्दीको उत्तरार्धमा ओसाका क्यासल र हिमेजी क्यासल जस्ता ठूला महल निर्माण हुन थाले। यद्यपि त्यस भन्दा पहिले महल पहाडमा निर्माण गरिएको थियो। टेकेडा महल यस्तो पुरानो महलको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो। टेकेडा महल १ 16 औं शताब्दीको बीचमा निर्माण गरिएको थियो र त्यसपछि क्रसल महल मालिकहरूले विस्तार गरेका छन्।
जापानको एकीकरणको लागि लक्षित ओडा परिवार र पश्चिमी जापानको विजेताको लागि मोरी परिवारको बीचको द्वन्द्वमा यो किल्लाको साथ हालको ह्योगो प्रान्त थियो। यस कारणले गर्दा, टेकेदा क्यासलमा, भयंकर लडाईंहरू धेरै भन्दा धेरै लडेका छन्। जे होस्, जब १ug०० मा टोकुगा शोगुनेट स्थापना भएको थियो र शान्तिमय युग आइसकेको छ, यस महलको भूमिका समाप्त भएको छ। टेकेडा महल १ 1600०० मा छोडियो।
लगभग minutes० मिनेट जति लाग्छ JR टेक्दा स्टेशनबाट पैदल मा टेक्दा कासल भग्नावशेषमा। जहाँबाट जेआर टेक्दा स्टेशनबाट पहाडको बीचमा चल्दछ, तपाईं २० मिनेटमा बस स्टपबाट टेकेदा क्यासल भग्नावशेषमा पुग्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले त्यो बस प्रयोग गर्नुभयो भने। टेक्डा महल भग्नावशेष कहिलेकाहीँ जाडोमा हिउँको कारण बन्द छ, त्यसैले भर्खरको जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
टेक्दा क्यासल भग्नावशेषमा कुहिरो दृश्यको अनुभव पाउन तपाईले बिहान सबेरै जानु पर्छ। यदि तपाईं जानु भए पनि, त्यहाँ कोहिना हुँदैन। क्षेत्र मा, अंग्रेजी संकेत पर्याप्त छैन। किनकि तपाईं पहाडहरूमा आफ्नो बाटो हराउन सक्नुहुनेछ, कृपया अति धेरै सावधान हुनुहोस्।
टेकेडा क्यासल साइटका विवरणहरूको लागि, कृपया निम्न आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। यो आधिकारिक साइट जापानी भाषामा लेखिएको छ, तर साइटसँग माथि दायाँमा गुगल ट्रान्सलेसन बटन पनि छ। कृपया गुगल अनुवाद प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको रोजाइको भाषामा यसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि।
>> टेकेडा महल खंडहरको आधिकारिक साइट यहाँ छ
म्याट्स् क्यासल जुन एक अवस्थित पुरानो महलहरू मध्ये एक हो = शटरस्टक
समुराई परम्परागत युद्ध हेलमेट र कवच म्यात्सुको म्यूज्युमा कसल संग्रहालय, Shimane प्रान्त, जापान = शटरस्टक
होन्शुको पश्चिमी भागमा जापानको समुद्रको किनारमा रहेको क्षेत्रलाई "सानिन" भनिन्छ। यस क्षेत्रमा ठूला शहरमा हराएका पुराना जापानहरू छन्। म्यात्सु शहर को बीचमा स्थित म्यात्सु महल, Shimane प्रान्त उनीहरु मध्ये एक हो।
म्यात्सु क्यासल १ 1611११ मा निर्माण गरिएको हो। अहिले पनि महल टावर यस्तै अवस्थामा नै छोडियो। म्यात्सु क्यासलको महल टावर कालो र शक्तिशाली छ। जब तपाईं यो महल टावरको तहखानेमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईं त्यहाँ एक पुरानो इनार देख्नुहुनेछ। यस फ्लोरमा लडाईको तयारीको लागि धेरै खानाहरू भण्डार गरिएको थियो। माथिल्लो तलामा चढ्ने सिढीहरू एकदम ठाडो ढलान हो, तपाईले यसलाई सफ्ट गर्न सजिलो देख्न सक्नुहुन्छ। काठको भित्री भागमा, समुराईको आर्मर र तरवारहरू प्रदर्शित हुन्छन्। माथिल्लो तलाबाट तपाईले सुन्जी ताललाई शिन्जी ताल भनिन्छ।
म्यात्सु क्यासलको वरपरको खाईपट्टि, साना साना दृश्य जहाजहरू अहिले कार्यरत छन्। यस दर्शनीय यात्रा लिनुहोस् र म्यात्सु क्यासलको वरिपरि जानुहोस्, तपाईं यस पुरानो महल शहरको वातावरणको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। घुम्न जाने डु boats्गाका लागि जापानी तातो उपकरणहरू जसलाई कोटाट्सु भनिन्छ जडान गरिएको छ, त्यसैले तपाईं हिउँदमा पनि आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
म्यात्सु क्यासलको बारेमा विवरणहरूको लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
>> म्यात्सु क्यासलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
सुरुमा वसन्त मा माटुसुमा महल = शटरस्टक
मत्सुयामा महल माचुयामा शहरको बीचमा अवस्थित छ, शिकोकोको उत्तरी भागमा एहिम प्रान्त। यद्यपि यो शहरको बीचमा छ, यो १132२ मिटर उचाई भएको सानो पहाडमा छ, त्यसैले यो महलको सुन्दर चित्र टाढाबाटै स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
मत्सुयामा महल १ 17 औं शताब्दीको शुरुमा शिकोको टोकुगावा शोगुनेटको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा निर्माण गरिएको थियो। पहाडको शीर्षमा महल टावरको वरपर "होनमारु (मुख्य घेरा)" छ। पहाडको फेदमा "निनोमारू (बाहिरी गढी)" र "सन्नोमारू (महलको बाहिरी क्षेत्र)" छन्। अर्को शब्दमा, पूरै पहाड महल हो।
तीन-कथा महल टावर बाँकी छ किनकि यो वास्तविक रूपमा बनाइएको थियो। महल टावरसम्म पैदल हिंड्न यसले लगभग minutes० मिनेट लिन सक्दछ। यदि तपाईं समुराई मुड अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ जसले महल टावरमा आक्रमण गर्दछ भने, म हिँड्न सिफारिस गर्दछु, तर यदि तपाईं त्यसो गर्नुहुन्न भने तपाईं रोपवे वा लिफ्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दुबै रोपवे र लिफ्ट पहाडको बीचमा सञ्चालन गरिन्छ। तिनीहरूबाट छुट पाए पछि यो महलको टावरहरूमा १० मिनेट पैदल छ। महल टावरको माथिल्लो फ्लोरबाट, तपाईं मत्सुयामा शहर र सेतो इनल्यान्ड सागर हेर्न सक्नुहुन्छ।
मत्सुयामा क्यासलको बारेमा विवरणहरूको लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> मत्सुयामा महलको आधिकारिक साइट यहाँ छ